Tilmaamaha Wax iibsiga: Dharka Ciyaaraha iyo Isbeddel Samee! - WoopShop ®
Alaabta / ₹0.00 0
Waxaa laga yaabaa inaysan u ekaan karin, laakiin dharka isku habboonaanta ayaa ah dharbaaxo marka laga hadlayo raaxada, ficil ahaan iyo qaabka! Iyada oo aan loo eegin xilli-xilliyeedka, qaar ka mid ah dharka ayaa loo aaneynayaa in ay aragti ka muujiyaan sanadka oo dhan.
Muxuu yahay mid soo jiidasho leh oo ku saabsan labiska dharka, si kastaba? Oh, waxyaabo fara badan!
Kuwa idinka mid ah ee caruur leh, waad hore u fahamteen xiriirka. Ma jiraan wax ka badan oo soojiidasho leh oo ka badan afar lammaane oo jaakad isku dheelitiran oo bannaanka u taagan oo weliba aad ugu habboon in la xidho. Isku qas coziness iyo style xilli ciyaareedkan oo sii qaar ka mid ah dharka isku habboon ee ugu habboon fursad ay ku ifkaan.
Hadda, haddii aadan wax dhiirigelin ah ka helin wixii aad dooran lahayd, anagaa ku daboolnaa. Halkan waxaa ah qaar ka mid ah muuqaalada ugu labbiska badan ee aad ugu baahan tahay qolkaaga armaajo:
Dharkeyga Qoyska Boqortooyada
Summer Style Cotton-King-Queen Qalabka Qoyska isku dhejisan
Va, va, voom! Waxaa jirtay mar boqorad, boqoradeeda iyo amiirkeedii yaraa iyo amiirkeedii! Ma jiraan wax ka qayliya jaceylka iyo isku dheelitirnaanta hal mar marka loo eego tan T-shirt ee isku habboon. Waqti ku bixi magaalada ama xiro maaliyaddan qaaliga ah ee guriga, laakiin hubso hal shay - saaxiibbadaada Instagram wey jeclaan doonaan!
Xisbiga Qoyska hurdada!
Naqshad jilicsan oo loo yaqaan 'Cotton Carbon'
Isbarbar dhig xafladaha qoyska ee dharka! Kaamil ah habeen filim filim guriga ah, kuwan isku dheelitirka ah ee dharka qoyska, Isku-darka Disney iyo qaabka sida ugu wanaagsan ee suurogal ah. Layaab ahaan hadiyado sidoo kale, haddii aad taqaanid qoys ku farxi lahaa in ay ku helaan joonyadan cajiibka ah guriga, wax walwal ah malaha - xitaa qaanso ayaan dul saari doonnaa!
Sida Aabaha, iyo sida Ilmaha oo kale!
Cute Print "Ctrl C + Ctrl V" Aabaha Aabaha & Me Meing T-shirt
Ka hadal waqti isku xirid aabe iyo ilmo iyo dharka! Sii ninkaaga wax uu ku sugayo inuu xirto oo aad ka hesho labiskan aadka u cajiibka ah ee T-shirts. Shaati-gacmeedka ilmaha-dusha loo yaqaan 'tandem shaatiga' waa aalado badan, fududaan oo si cad u muuqda kartoonka-y vibe. Taabadalkeed, waxay soo bandhigaan dareen kaftan, midabyo caan ah oo qurux badan oo dhexdhexaad ah (cirro waa midab farxad leh!). Iyo, dabcan, ma ilaawi kartid raaxada aad u keentid labadaba dhallaankaaga iyo lammaanahaaga.
Hooyo-Gabadh Dhar Labis Ah!
Ka bax Shahaadada Caanaha Gogol-Celinta ee Hooyo-Hooyo
Samee habka xafladda qoyska una soo jiid koofiyaddan labbiska hooyada iyo gabdhaha u dhigma. Iyada oo naqshad yar oo dhinaca-banaanka ah, iyo mowduucyo ubax badan leh, adiga iyo ilmahaaguba waxaad isugu buuxin doontaan labada dharka ugu labisan habeenka! Samee munaasabad reerka ka sii xiiso badan oo sii canuggaaga gabadha wax la mid noqoshada habeenka!
Saaxiibbadu Waxay U Xisaab Yihiin Qoys, Sidoo Kale!
Fikradaha Fikradaha ah ee Foornada Cotton ee ugu Fiican Saxaabada T-Shirt
Markaad ka fikireyso qaabka oo aad u dhigto qof aad jeceshahay, maahan in qoyska mar walba maskaxda ku soo dhaca. Xaqiiqdii, asxaabta waa in lagu ixtiraamaa sidoo kale loona daaweeyaa si muuqata oo moodada dharka ku habboon. Waxaa soo raaca T-shirts-yada lama-huraanka ah ee BFF-ta oo aan tusin muhiimada kaliya ee saaxiibtinimada laakiin waxay sidoo kale carrabka ku adkeynaysaa sida wada jirka ah ee ay koox uga soo saaraan.
Marabtaa inaad hesho dhiirrigelin dheeraad ah? Madaxa WoopShop.com ama dukaamaysigeena internetka app oo ka soo qaado xulashadaada tirada waxyaabaha u dhigma qiimo dhimista! La soco wixii soo kordha badeecadeena ugu dambeysa, oo ku hay moodel, la awoodi karo oo raaxo leh!
Waxyaabaha Dhaqdhaqaaqa ah ee Ilmaha iyo Cunugga: Samee Munchkin Maqaarka!